🥇 ▷ Huawei: doorka ugu weyn ee iPhone X wuxuu si toos ah uga imaan lahaa xilligii pre-iPhone X xilligiisii ✅
Huawei: doorka ugu weyn ee iPhone X wuxuu si toos ah uga imaan lahaa xilligii pre-iPhone X xilligiisii
In kasta oo ay jiraan ku dhowaad dhammaan soo-saareyaasha waxaan si ula kac ah u go’aansannay in aan raacno dariiqa feejignaan oo laga helay Apple oo leh iPhone X, ma ahan wax qarsoon in qayb weyn oo ka mid ah dadweynaha aysan gabi ahaanba dheefshiideynin, iyagoo cod dheer weydiinaya. xalalka Beddelka, xitaa in lagu kala saaro naqshadeynta aaladda. Huawei wuxuu ka mid ahaa kuwa ugu horreeya ee soosaaraya taleefannada gacanta casriga ah ee caan ku ah caannimada, laakiin mustaqbalka dhow waxaa laga yaabaa inay maskaxda ku hayaan a ‘wareejin. In ka badan ama ka yar.
Vivo iyo OPPO waxay na tuseen sida hada muuqata ee lama huraanka ah ee ah in la kordhiyo dusha ay kujirto muujinta ay nagu qasbeyso inaan xalino xalalka khayaali ah inaad dhiibto xalka ugu fudud uguna muranka badan, kaas oo ah feejignaan. Farxad ahaan sida ay yihiin, tabaha labada sheybaar ee Shiinaha ayaa weli kor u kaca calaamadaha su’aasha ku saabsan waxqabadka iyo cimri dherer. Huawei ayaa markaa ka fikiraya sidii ugu yaraan yaree raad-raaca ee feejignaan, run ahaantii qaadashada sheeko ka socda taleefanka casriga ah ee awood u leh filashada iPhone X lafteeda.
AKHRISO: Huawei P Smart + rasmiga ah
Waxaan si cad u tixraacnaa Taleefanka Muhiimka ah, kaasoo markii ugu horreeyay ku soo bandhigay shaybaadh wareeg ah, si guriga loogu hayo kamaradda hore. In yar ayaa raacday tusaalaha, iyagoo door bidaaya in ay la jaan qaadaan awooda Cupertino, laakiin in kabadan hal sano kadib, Huawei wuu ka fikiri karaa arintan dib u bilaw xalkaan. Tani waa waxa ka soo baxa a comp liidato, taas oo muujineysa sida ay hay’adda Shiineesku sidoo kale u qiimeyneyso fikraddan. Miyaad door bidaysaa xalka noocan oo kale ah, had iyo jeer waa mid duuba laakiin ka caqli badan oo xarrago leh, ama miyaad door bidaa khamaarka Vivo iyo OPPO?
Dhanka: GSM ArenaXigasho: ETNews